ရောင်းဝယ်လို့ရတဲ့ ငွေကြေးအတွဲတွေ အမြောက်အများရှိကြတယ်ဆိုတာ လူတိုင်းတော့မသိကြပါဘူး။ ရောင်းဝယ်သူ တော်တော်များများ၊ အထူးသဖြင့် လူသစ်တွေဆို အဓိက Forex အတွဲတွေဖြစ်တဲ့ EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY တို့ကိုပဲ ရောင်းဝယ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်ကို ပိုကြီးမားတဲ့ ငွေပမာဏတွေရစေမည့် တခြားအခွင့်အလမ်းတွေအကြောင်း တွေးဖူးပါသလား?
ဤဆောင်းပါးတွင် အဓိက ငွေကြေးအမျိုးအစားများအကြောင်း ပြောသွားပါမည်။ သင့်ဝင်ငွေ မြှင့်တင်ရန် မတူညီတဲ့အခြေအနေတွေမှာ ဘယ်အတွဲတွေကို အသုံးပြုရမလဲဆိုတာ သိလာပါလိမ့်မည်။
ခိုလှုံရာနေရာ ဆိုတာဘာလဲ သင်သိပါသလား? ခိုလှုံရာနေရာဆိုတာ သင့်ကို ထိခိုက်မှု (သို့) အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ပေးထားတဲ့ နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီငွေကြေးတွေဟာလည်း သင့်ကိုစီးပွားရေး အန္တရာယ်ကနေ ကာကွယ်ပေးမည့် ငွေကြေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခိုလှုံရာ (သို့) ခိုမှီရာငွေကြေးများသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများက သူတို့စုငွေအတွက် လုံခြုံရာနေရာရှာချင်တဲ့အခါ ဈေးကွက်ကြောက်ရွံ့မှုဖြစ်လာချိန်၊ မသေချာတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာ အားကောင်းလာတဲ့ငွေကြေးများပဲဖြစ်ပါတယ်။
ထိုငွေကြေးတွေက ဘာတွေလဲ? အရှုံးနည်းတဲ့ငွေကြေးတွေဟာ နိုင်ငံရေးနဲ့ စီးပွားရေး တည်ငြိမ်မှုရှိပြီး၊ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်းနှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပ ငွေပေး၊ငွေယူမှုရှင်းတမ်း အပိုအလျှံနည်းတဲ့နိုင်ငံများနဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ မတူညီတဲ့ငွေကြေးများသည်လည်း ခိုမှီရာငွေကြေး ကဏ္ဍကနေပါဝင်လာကြပါတယ်။ ခုထိတော့ ထိုငွေကြေးများသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ဂျပန်ယန်း နှင့် ဆွစ်ဖရန့် တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဖော်ပြချက်တိုတိုလေး တစ်ခု ပေးပါရစေ။
အမေရိကန်ဒေါ်လာသည် အကျော်ကြားဆုံးနဲ့ အရောင်းအဝယ်အတွင်ကျယ်ဆုံး အရန်ငွေကြေးဖြစ်သည်။ ၁၉၄၅ခုနှစ် ဘရက်တန်ဝုဒ်ညီလာခံမှစပြီး ဤကဏ္ဍကနေ ပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ်ကာလအတွင်း ကမ္ဘာ့နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း၏ ၆၀%ကျော်သည် ဒေါ်လာကိုသုံးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူပဲ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများက USDကို စိတ်ချရပြီး လုံခြုံတဲ့ငွေကြေးတစ်ခုအနေနဲ့ မြင်ကြတာပါ။ အမေရိကန် စီးပွားရေးတိုးတက်နှုန်းနဲ့ လုပ်သားဈေးကွက်အကြောင်း ခိုင်မာတဲ့သတင်းများကလည်း ဒေါ်လာလဲလှယ်နှုန်းကို အကူအညီဖြစ်စေပါတယ်။
ဂျပန်ယန်းသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအများအပြားကို ဆွဲဆောင်တဲ့ နောက်ထပ်ငွေကြေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်မှ မကောင်းသတင်းတွေထွက်လာရင်တောင်မှ ယန်းဈေး မြင့်လာနိုင်တာ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဒါဟာ ဂျပန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများက သူတို့ငွေတွေကို (နေရပ်ပြန်ပို့ခြင်းလို့ လူသိများတဲ့) ပြည်ပကနေ ပြည်တွင်းဈေးကွက်ကို ပြန်ပို့လာတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ AUD/JPY, NZD/JPY, CAD/JPY တို့လို အရံငွေကြေးအတွဲများကို အရောင်းအဝယ်မြင့်ပြီး၊ ကုန်စည်ဈေးကွက်အတွင်းဖြစ်လာတဲ့ မကောင်းသတင်းများက ယန်းဈေးကို မြင့်သွားစေပြီး၊ ရလဒ်အနေနဲ့ ဒီအတွဲဈေးတွေကို ကျဆင်းစေပါတယ်။
အချုပ်ဆိုရသော် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများက သူတို့၏ငွေစုတွေကို ထိန်းသိမ်းရန်လိုတဲ့အခါ မတည်ငြိမ်တဲ့ စီးပွားရေးအခြေအနေများအတွင်း ပိုပြီးတော့ အရံငွေကြေးတွေကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။
လူသုံးကုန်ဆိုတာ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရာမှာအသုံးပြုတဲ့ အခြေခံကုန်စည်မှန်း သင်သိမည်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။ ဒီဖွင့်ဆိုချက်ကို သင်မှတ်မိတယ်ဆိုရင် ကုန်စည်ငွေကြေးများနဲ့ နိုင်ငံများကို ဆုံးဖြတ်ရန် သင့်အတွက် ခက်ခဲမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကုန်စည်ငွေကြေးများသည် ရေနံ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ကျောက်မီးသွေး၊ အဖိုးတန်သတ္တုစတဲ့ သဘာဝသယံဇာတ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် တင်ပို့မှု၏ ရှယ်ယာကြီးနဲ့ စီးပွားရေး၏ ငွေကြေးများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကနေဒါ၊ သြစတြေးလျနှင့် နယူးဇီလန် ဒေါ်လာများ၊ ရုရှားရူဘယ်နှင့် နော်ဝေ ခရုန်းတို့သည် ဒီငွေကြေးထဲမှာ ပါပါတယ်။
သို့သော်လည်း ကုန်စည်ငွေကြေးအများစုဟာ အစိုးရကစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနဲ့ထိန်းထားပြီး၊ ဈေးကွက်မှာ အလုံအလောက် မရောင်းဝယ်ကြပါဘူး။ ဒါဟာ နိုင်ငံတကာForexဈေးကွက်မှာ ငွေကြေးသုံးမျိုး: ကနေဒါ၊ သြစတြေးလျနဲ့ နယူးဇီလန် တို့ကိုသာ အသုံးများကြခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့သည်ပြောင်းရလွယ်ပြီး၊ အတက်အကျလွတ်လပ်ပါတယ်။
ဤငွေကြေးများ၏ တမူထူးခြားတဲ့လက္ခဏာရပ်များကတော့ သူတို့ကိုလဲလှယ်တဲ့နှုန်းများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ဈေးကွက်အန္တရာယ် အခြေအနေ နှင့် အထူးသဖြင့်ဆို ပို့ကုန်များ၏အရွေ့များ၏ လွှမ်းမိုးမှုကြီးခံထားရခြင်းဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာစီးပွားရေးချဲ့ထွင်လာပြီး၊ သယံဇာတများအတွက် ဝယ်လိုအားများလာတဲ့အခါ ဤငွေကြေးများ အားကောင်းလာပါတယ်။ ဤနိုင်ငံများက တန်ဖိုးကြီးတဲ့ကုန်စည်များကို ရောင်းချခြင်းမှ ပိုမြင့်တဲ့ ဝင်ငွေရနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ သူတို့ကို အတိုးနှုန်းမြင့်လာစေပါတယ်။ ပိုမြင့်သောနှုန်းထားများသည် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား တိုင်းပြည်သို့ ဆွဲဆောင်ပါတယ်။
ဒီလိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် ကယ်ရီ အရောင်းအဝယ်: အတိုးနှုန်းနည်းတဲ့ငွေကြေးကို ချေးယူပြီး၊ အမြတ်ကြီးကြီးပြန်ရမည့် ကုန်စည်ငွေကြေးမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ဗျူဟာ ကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။ အမြတ်များခြင်းဟာ အန္တရာယ်များခြင်းနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ကယ်ရီအရောင်းအဝယ်သည် ကုန်စည်ငွေကြေးများမြင့်လာခြင်းကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း အခြေအနေတွေပြောင်းပြန်လည်သွားရင်၊ ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေများ ဆိုးရွားလာရင် ဒါဟာ အရင်းငွေအထွက်ဖြစ်သွားစေနိုင်ပြီး၊ ကုန်စည်ငွေကြေးကျဆင်းသွားစေပါလိမ့်မည်။ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ယိမ်းယိုင်သွားတဲ့အခါ ကုန်စည်ငွေကြေးများလဲ ကျသွားပါတယ်။
ကယ်ရီအရောင်းအဝယ်ရဲ့ သာဓကတစ်ခုကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်။ သြစတြေးလျအတိုးနှုန်းများက ဂျပန်ထက်မြင့်တဲ့အခါ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများက ယန်းကိုရောင်းပြီး၊ သြစတြေးလျဒေါ်လာကို ဝယ်ယူကြပါတယ်။ ဒါဟာ AUD ဈေးတက်စေပါလိမ့်မည်။ သြစတြေးလျနှုန်းများနှေးကွေးလာမှု တိုးလာတဲ့အခါ (သို့) ဈေးကွက်မတည်ငြိမ်မှုမြင့်လာတဲ့အခါ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများက သူတို့အရောင်းအဝယ်ကိုပိတ်လိုက်ပြီး၊ AUD တန်ဖိုး ကျသွားပါတယ်။ ကုန်စည်နှင့် ခိုမှီရာငွေကြေးကြားက ဒီလိုနှုန်းထားကွာခြားမှုများက မကြာခဏဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ကုန်စည်ငွေကြေးနဲ့ အဓိကနိုင်ငံသုံးခုကို ကြည့်ကြရအောင်။
ကနေဒါသည် ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ သယံဇာတများကြောင့် ကျော်ကြားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကနေဒါဒေါ်လာသည် ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့အပေါ် အလွန်မူတည်နေပါတယ်။ ရေနံစိမ်းဈေးမြင့်လာတဲ့အခါ ကနေဒါဒေါ်လာ တန်ဖိုးတက်လာပါတယ်။ တပြိုင်တည်းမှာပဲ ကနေဒါ၏စီးပွားရေးသည် အမေရိကန်၏ စီးပွားရေးနှင့်ချိတ်ဆက်နေပါတယ်။ အမေရိကန်သည် ကနေဒါနိုင်ငံ ကုန်စည်များ၏ အဓိက တင်သွင်းသူဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အမေရိကန်စီးပွားရေးအားနည်းခြင်းသည် ကနေဒါနိုင်ငံ၏ ပို့ကုန်ကျဆင်းခြင်းနှင့် CAD ဈေးကျခြင်းဖြစ်စေပါတယ်။
သြစတြေးလျသည် သဘာဝသယံဇာတများ - ကြေးနီနှင့် သံသတ္တုရိုင်းများ တင်ပို့ပါသည်။ တရုတ်နိုင်ငံသည် သြစတြေးလျကုန်စည်များ၏ အကြီးဆုံးအဝယ်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက် တရုတ်စီးပွားရေးသည် သြစတြေးလျဒေါ်လာအပေါ် ကြီးမားတဲ့သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ တရုတ်စီးပွားရေးပြယုဂ်များသည် အပြုသဘောဆောင်လျှင် USDကိုဆန့်ကျင်ပြီး AUDတန်ဖိုးတက်လာပြီး၊ အပြန်အလှန်ဖြစ်သည်။
နယူးဇီလန် တင်ပို့မှုများသည် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ: နို့ထွက်ပစ္စည်းများ၊ အသား၊ သစ်သားနှင့် သိုးမွှေးကို အခြေခံထားပါသည်။ ငွေကြေးသည် နို့ထွက်ပစ္စည်းလေလံများ၏ ကိန်းဂဏန်းအားဖြင့် သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်၊ ဥပမာ၊ ကမ္ဘာ့နို့ထွက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေး။ ဒါ့အပြင် နယူးဇီလန်စီးပွားရေးသည် သြစတြေးလျစီးပွားရေးနှင့် ဆက်စပ်နေပါသည်။ အကျဉ်းချုပ်ရသော် ရောင်းဝယ်သူများသည် ကုန်စည်ငွေကြေးများကို ရောင်းဝယ်ချင်တဲ့အခါ ကုန်စည်တန်ဖိုးများ ဦးတည်ရာလမ်းကြောင်းကို လိုက်လေ့လာသင့်ပါသည်။
နိဂုံးချုပ်ရသော် Forex ရောင်းဝယ်သူများသည် စီးပွားရေးအခြေအနေများကို အမြဲထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး တည်ငြိမ်ပြီး၊ တိုးတက်နေတဲ့အခါ ရောင်းဝယ်သူများသည် AUD, NZD နှင့် CAD လို ကုန်စည်ငွေကြေးများကို ရောင်းဝယ်ပြီး အမြတ်ကြီးကြီးရနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း စီးပွားရေး မတည်ငြိမ်တဲ့ကာလအတွင်းမှာတော့ ခိုမှီရာငွေကြေးများဖြစ်တဲ့ - JPYနဲ့ CHF ကိုရွေးတာပိုကောင်းပါတယ်။
ကုန်စည်နှင့် ခိုမှီရာငွေကြေးများ ပါဝင်တဲ့ ငွေကြေးအတွဲ အရေအတွက်အများကြီးရှိပါတယ်။ ဤငွေကြေးအတွဲများမှာ ကြီးမားတဲ့ အမြတ်အစွန်းရနိုင်ခြေရှိကြပါတယ်။